New – Latest News
September 15, 2019 New
ဓမ္မတာနှင့်​ဆန့်​ကျင်​ပြီးပါးစပ်​ဖြင့်​ ပြုကျင့်​ခဲ့သူကို အမှုဖွင့်​လိုက်​တဲ့ပေါက်​မြို့နယ်​ကဖြစ်​ရပ်​တခု.
ပေါက်​မြို့နယ်​ ———ကျေးရွာအုပ်​စုနေမ——— (သ) ၃၃ နှစ်မှတရားလိုပြုလုပ်​တိုင်​တန်းသည်​မှာ 7-9-2019 ၁၈၀၀ အချိန်ခန့်တွင် တရားလိုသည် တစ်ရွာတည်းနေမိခင်၏ ၊ နေအိမ်သို့ ဟင်းရွက်များ ပြီး နေအိမ်သို့ ပြန်လာစဉ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုသန်းထိုက်အောင်၊* တစ်ရွာတည်းနေ ၎င်း၏ ညီနှစ်ဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ စိုးမိုးအောင်တို့နှစ်ဦးမှာ နေအိမ်ထပ်ရှိ ဝါးကွပ်ပျစ်ပေါ်တွင် အရက်ထိုင်သောက်နေသည်ကို […]
August 29, 2019 New
ဆုတောင်းတွေမပြည့်ခဲ့ဘူးကွယ် ရင်ထဲဆို့နစ် …အခုတော့ မေ့သွားကျပြီလား…….
ဆုတောင်းတွေမပြည့်ခဲ့ဘူးကွယ် ကိုယ့်အရေးကိုယ့်ဒုက္ခတွေထက် သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် ပိုဆုတောင်း ခဲ့တာတောင် ဝင်းနှင့် ဇော် နောက်ဆုံးအယူခံရူံးနိမ့် သေဒဏ်ကို ဆက်လက်အတည်ပြု လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုဖြင့် သေဒဏ်ကျနေသောမြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦး၏ နောက်ဆုံးအယူခံကို ထိုင်းတရားရုံးက အမိန့်ချရာ အယူခံရူံးနှိမ့်ပြီး သေဒဏ်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နွန်ထဘုရီခရိုင်တရားရုံးတွင် တရားသူကြီးက မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦးဖြစ်သော ဝင်းဇော်ထွန်းနှင့် ဇော်လင်းတို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် […]
August 19, 2019 New
ပိုင်တံခွန်အတွက်ဆို ခွေးတောင်အဖြစ်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးပရိပ်သတ်တွေ…….HA hA
နိုင်ငံကျော်မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်က ယောကျာ်းဆန်တဲ့ ကြွက်သားအဖုအထစ်တွေနဲ့ တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ပါ။ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ရုပ်ရည်က မိန်းကလေးတွေ ကြွေချင်စရာဖြစ်ပြီး မကြိုက်တဲ့သူမရှိလောက်အောင်ကို ချောမောတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ကို မြန်မာနိုင်ငံက မိန်းကလေးတွေသာမက ထိုင်းနိုင်ငံက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကပါ သည်းသည်းလှုပ် အားပေးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ပိုင်တံခွန်က […]
August 10, 2019 New
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း…..(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၀)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် ရှိကြောင်း မိုးလေဝသသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာ ကွက်ကျား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ […]
အနုပညာမှာ ချွတ်ရမယ့်အခန်းဆို ချွတ်ရမှာပဲဆိုဆဲ့ ညိုမင်းလွင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထူးထူးခြားခြား ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးတတ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်ကတော့ သူ့အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထြုမှာ ဖော်သင့်ဖော် ချွတ်သင့်ရင် ချွတ်ရမှာပဲလို့ ပြောကြားသွား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညိုမင်းလွင်ကတော့ The Spa ဇတ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်တွေကို ဘယ်လို စည်းရုံးလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို “ဘယ်လိုစည်းရုံလည်းဆိုတော့ ကိုယ်တွေက တဏှာရူးနေတာမဟုတ်ဘူးလေ အလုပ်အရ […]
August 9, 2019 New
စူးရှထက်မှ အမှုကြေအေးပြီးဖြစ်သော်လည်း အစ္စဏီ၏ အာမခံလျှောက်ထားမှု တရားရုံးမှ ပယ်ချ